#Wararkii ugu Dambeeyay Suuqa kala iibsiga iyo mustaqbalka Neymar, Antoine Griezmann iyo Samuel Umtiti | Get Latest News From Horn of Africa
Home Somali #Wararkii ugu Dambeeyay Suuqa kala iibsiga iyo mustaqbalka Neymar, Antoine Griezmann iyo...
Halkaan waxaan kusoo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ay ka qoreen wargesyada waaweyn ee ka faalooda ciyaaraha maanta oo Axad ah.
Liverpool ayaa kalsooni ku qabta inay £ 40 milyan oo ginni kula wareegto 24 sanno jirka goolka u qabta kooxda Stoke City Jack Butland. (Sunday Mirror)
Tababaraha Juventus Massimiliano Allegri, oo 50 jir ah, ayaa diyaar u ah inuu aqbalo shaqada tababare ee kooxda Arsenal haddii Arsene Wenger oo 68 jir ah ka tagayo Gunners dhamaadka xilli ciyaareedkan. (Sun on Sunday)
Manchester United ayaa qorsheyneysa inay u dhaqaaqdo daafaca dambeedka bidix ee kooxda Juventus Alex Sandro oo 27 jir ah, (Sunday People)
Neymar ayaa doonaya inuu ka tago Paris Saint-Germain isaag oo hamigiisu yahay kooxa waaweyn, laakiin kooxda heysata horyaalka Ligue 1 ayaan dooneynin inay u ogolaato ciyaaryahanka reer Brazil inuu ka tago Parc des Princes xagaagaan, sida laga soo xigtay khabiirka kubada cagta Guillem Balague .
AC Milan ayaa qorsheyneysa inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Jack Wilshere oo 26 sanno jir ah, kaasoo qandaraaskiisu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkaan, (Sunday Express)
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola, oo 47 jir ah, ayaa sheegay inuu haysto qorshe 10 sano uu kusii wadi karo mamaulka kubadda cagta. (Sunday Mirror)
Real Madrid ayaa dooneysa inay heshiis la gaarto goolhayaha 21 jirka ah ee reer Croatia Karlo Letica haddii ay awoodi waayaan keenista David de Gea oo 27 jir ah, (Marca)
Crystal Palace weeraryahankeeda Christian Benteke, oo 27 jir ah ayaa u muuqda mid kusii jeeda horyaalka Chinese Super League. (Sun on Sunday)
Tababaraha Watford Javi Gracia kama warhayo hadii ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer France Abdoulaye Doucoure oo 25 jir ah uu baaqi kusii ahaan doono Vicarage Road (Watford Observer)
Weeraryahanka Manchester United Jesse Lingard oo 25 jir ah ayaa qandaraas cusub u saxiixaya kooxda ku ciyaarta Old Trafford, kaliya 11 bilood ayaa ka haray heshiiskiisa haatan. (Sunday Star)
Tababarihii hore ee Crystal Palace Frank de Boer ayaa aaminsan in 25 jirka garabka ka ciyaara ee Wilfried Zaha uu fure u yahay rajada kooxdan kusii joogi karto horyaalka Premier League, (BT Sport)